Madaxweynihii hore ee dowlad degaanka Soomaalida oo lagu jir dilay xabsiga uu ku xiran yahay - Latest News Updates
Madaxweynihii hore ee dowlad degaanka Soomaalida oo lagu jir dilay xabsiga uu ku xiran yahay
hooyada dhashay Madaxweynihii hore ee dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxa ay sheegtay in wiilkeeda lagu jir dilay xabsi ku yaalla magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Waxa ay sheegtay dhacdadaasi inay la kulantay xilli iyada iyo xaaska Cabdi Maxamuud ay raashiin geeyeen xabsiga, islamarkaana ay aragtay wiilkeeda oo Sideed nin ay garaacayeen, kadibna laga soo tuuray jaranjaro ku taalla xabsiga gudihiisa.
Waxa ay sheegtay inay qaylisay iyada iyo xaaska Cabdi Maxamuud Cumar oo wada socda, islamarkaana raggii xabsiga haystay ay soo eryadeen, sidoo kale waxa ay tilmaamtay in dhulka madaxa looga garaacay Cabdi Maxamuud Cumar, xittaa uu gabay codkii taaha ahaa ee xanuunka.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Ali ayay ka codsatay in arrintan deg deg wax looga qabto, wiilkeedana xabsiga laga sii daayo, maadaama sida ay sheegtay xanuuno kala duwan uu qabo.
Cabdi Maxamuud Cumar ayaa 27-kii August ee sanadkan lagu xiray xabsi ku yaalla magaalada Addis Ababa, kadib markii gurigiisa ay ka soo kaxeeyeen ciidanka Itoobiya, eedeymaha loo heysto waxaa ka mid ah dhibaatooyin loo geystay dad shacab ah.